Mayelana NATHI - SmartFortune Packaging Co., Ltd.
ISmartFortune Packaging Co Ltd ingumkhiqizi waseChina oshicilela futhi owenzela izinto ngokukhethekile ekukhiqizeni izincwadi eziningi ezijwayelekile, amabhokisi wangokwezifiso, izikhwama zamaphepha ezijwayelekile njll. Sitholakala eDongGuan city, esifundazweni saseGuangDong, eChina; Kuseduze kweHongKong, iShenZhen neGuangZhou, cishe ihora elilodwa kuphela ngemoto.
Sinezisebenzi ezinamakhono angaba ngu-360, futhi sisebenzisa okuhlangenwe nakho kwethu cishe kweminyaka engama-25, singanikeza amakhasimende isixazululo esiguquguqukayo ngentengo yefektri yokuncintisana kanye nokulethwa okuphephile okusheshayo emnyango.
1. Izincwadi zokuphrinta ngokwezifiso: Izincwadi ezinoqwembe oluqinile, izincwadi ezinoqwembe oluthambile, izincwadi eziVuthayo, izincwadi zezingane, Izincwadi zezingane, ukuphrinta izincwadi
2.Ibhokisi lokupakisha elenziwe ngokwezifiso: Ibhokisi lephepha, ibhokisi lesipho, ibhokisi le-Chocolate, ibhokisi leMacarons, ibhokisi lezimonyo, ibhokisi lekhadibhodi, ibhokisi lukathayela, ibhokisi lesipho eliqinile, ibhokisi lesipho sephepha, ibhokisi lokupakisha iphepha njll.
3. Isikhwama sephepha ngokwezifiso: Isikhwama sephepha le-Kraft, isikhwama sephepha lesipho, isikhwama sephepha lokuthenga njll.
4. Eminye imikhiqizo yangokwezifiso yokuphrinta nokupakisha;
Equipments zethu Main
● Umshini wokuphrinta weHeideberg 5C
● Heideberg 4C umshini wokunyathelisa
● Umshini wemibala emibili weRoland
● Spot UV umshini okuzenzakalelayo ngokugcwele
● Umshini wokucindezela wokunyathela
● Umshini wensimbi
● Umshini wokuthunga osebenza okuningi
● Umsiki wephepha lomfutholuketshezi
● Umshini wokucindezela umshini ocindezela ukushisa ophakeme
● Umshini oyisisekelo wokubopha
● Umugqa obophezelayo we-edishini
● Umshini we-ridge oyindilinga
● Umshini wokuthunga
● Umshini wokusonga iphepha
● Umshini wokubopha iglue
● Cindezela kabili ukweqa othomathikhi okuzenzakalelayo umshini
● Umshini wokuhlanganisa izincwadi
● Umshini wokunamathisela we-semi-othomathikhi
● Ukuzisika okuzenzakalelayo
● Umshini wokuvikela ngaphezulu
● umshini wokusika we-lazer wamasampuli
Izitifiketi: FSC, SGS, FDA, SEDEX ....
Sikhiqiza ibhokisi lokuphrinta, isikhwama sephepha, ibhuku lokuphrinta njll. NjengeSWAROVSKI, BOSS, GUCCI, HARRODS, njll imikhiqizo edumile
Ama-95% okuthekelisa ibhizinisi, anolwazi oluhle kakhulu lokuthunyelwa kwamanye amazwe, azi ngaphezu kwabanye ukuthi ungonga kanjani izindleko zokuthumela zamakhasimende emikhiqizo yokuphrinta